Ukutya okunesodiyam ephantsi okanye ukunciphisa indlela yokutya ityuwa | Amadoda aQinisekileyo
Ukutya okuphantsi kwesodium
Ukutya okunesodiyamu esezantsi yenye indlela yokutya okwangoku, ezihlala zibandakanya isodiyam eninzi ngenxa yokutya okukhawulezayo kunye nokutya okucutshungulwayo.
Kwaye inyani kukuba inxenye elungileyo yesodium ekutyeni kwakho ayiveli kugungqa ityuwa, kodwa endaweni yoko iya kukutya okucutshungulwayo. Ukuba ukutya okukhawulezayo kunye nokutya okucutshungulwayo kuninzi kwisondlo sakho, kunokwenzeka ukuba ungaphezulu komda we-sodium yemihla ngemihla, eyi-1.500 milligrams mihla le. Ukutya okunesodiyamu esezantsi sisiqalo esihle sokusombulula le meko inobungozi kwimpilo yakho.
1 Iingcebiso zokuthatha i-sodium encinci
1.1 Cinga ngokutya kweMeditera
1.2 Sukufaka ityuwa de uyive
1.3 Jonga iilebhile
2 Ungakugcina njani ukutya okuphantsi kwesodium ngaphandle kwekhaya
Iingcebiso zokuthatha i-sodium encinci
Ngokwendalo, Ukugqitha kwesodium ekutyeni ayingombandela ekufuneka uthathwe kancinci. Kwaye, njengoko sele uyazi, ukusebenzisa ityuwa eninzi kunyusa umngcipheko wexinzelelo lwegazi, olunokubangela ukubetha kunye nesifo sentliziyo.
Ngenxa yoko, ukulawula isodiyam kufuneka ibe yenye yezinto eziphambili xa kuyilwa isicwangciso sokutya. Apha sichaza Uyamkela njani indlela yokuphila esezantsi yesodium ukukhusela imithambo yakho kunye nempilo iyonke.
Ukuba ufuna ukulandela ukutya okuphantsi kwesodium, Kuya kufuneka uqhele ukutya ukutya okucutshungulweyo kwaye endaweni yawo ufake ukutya okutsha… Ngokuya kubaninzi ngokuya kubamnandi. Ukutya ukutya okutsha kokutya yenye yemicimbi yoluntu esalindelweyo, ukulungeleka ngenxa yezinto ezininzi, kubandakanya nokwehliswa kwesodium okubandakanya oko. Ukutya kweMeditera ngumbono omkhulu, njengoko kubandakanya iziqhamo kunye nemifuno.
Kwaye ukunambitha ukutya kwakho, kuyakufuneka ugcine i-salt shaker kwaye uxhomekeke kwiziqholo, inyama kunye ne-broth broth, iziqhamo ze-citrus kunye negalikhi kunye netswele. Ukufaka endaweni yetyuwa kwezi ndlela azisempilweni kuphela, kodwa kukwaphucula incasa yezitya, kwandise amandla kunye nenani leempawu.
Cinga ngokutya kweMeditera
Jonga eli nqaku: Ukutya kweMeditera. Le ndlela yokubona ukutya (kunye nokuqonda ubomi) isekwe kukutya okutsha. Apha sichaza indlela yokuyilandela kwaye ubone zonke izibonelelo zayo zempilo.
Sukufaka ityuwa de uyive
Ngcamla ukutya ngaphambi kokongeza ityuwa. Amaxesha amaninzi kwenziwa ngokuzenzekelayo, kodwa ukuba uyazama ngaphambili, kumaxesha amaninzi uya kuthi ufike kwisigqibo sokuba akuyomfuneko ukongeza ityuwa (ngakumbi xa kufikwa kukutya okutsha kunye nexesha lonyaka). Intwana yetyuwa apha naphaya ibonakala ingabalulekanga, kodwa ukuba iyongeza ngaphezulu kweveki okanye inyanga iba sisixa esikhulu kakhulu setyuwa. Ke ngoko, esi sicwangciso siya kukunceda ukunciphisa kakhulu ukutya kwakho kwesodium.
Ngokufanelekileyo, ukuze iziphumo zokutya okune-sodium ephantsi zikhawuleze kwaye zibonakale kukutya ukutya okutsha rhoqo, kodwa nikezela ngokupheleleyo zokutya ngumsebenzi onzima. Sithetha ngokutya okuhlanganisiweyo (nokuba kukwenziwe enkonkxiweyo, iplastikhi okanye izitena), inyama ezigqityiweyo ezinjengeesoseji, ukutya okuziinkozo, iimveliso zokubhaka kunye nesonka esithile.
Yintoni esesandleni sakho kukubheja kuhlobo olunesodium encinci. Abavelisi baxela ukwenziwa kwemveliso kwiileyibhile, ke Jonga isodiyam kwaye uyithelekise nabanye ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona nto unokukhetha yona.
Ungakugcina njani ukutya okuphantsi kwesodium ngaphandle kwekhaya
Ngaba utya rhoqo ngaphandle? Oko kuyawenza ube nzima umsebenzi wokugcina isodiyamu iphantsi kolawulo, kuba asinokwazi ukuba yonke into esiy-odola kwiivenkile zokutyela ilungiselelwe njani. Nangeyiphi ndlela, ungasebenzisa intuition yakho ukukhetha ukhetho olunesodium encinci xa unyanzelwe ukuba utye ngaphandle. Iivenkile zokutya okukhawulezileyo zikhawulela ekudibaniseni izidlo, ngenxa yoko inani leetyuwa alinakutshintshwa. Ngokwahlukileyo, iivenkile zokutyela zesintu zilungiselela ukutya okuninzi kukutya okutsha kwaye ngalo mzuzu (okanye ubuncinci kufanelekile), evumela ukongeza ityuwa encinci okanye ukungafaki nantoni na ukuba umthengi uyayicela.
Kwaye ukuba awunakukhetha ngaphandle kokutya kwenye yezo ndawo zokutyela, ungasoloko u-odola esona sitya sisempilweni (usebenzisa intuition kwakhona), Ukutsiba iinxalenye ukuba ekuphela kwendlela enokubakho kukutya okunesodiyam ephezulu kwaye uphephe iisosi (ketchup yenye yazo kodwa ayisiyiyo yodwa) okanye uzisebenzise ngexabiso elincinci.
Izinto ezinje ngoku-odola isahlulo esincinci okanye ukukhapha isidlo kunye nesaladi endaweni yokuba, umzekelo, iifriji zesiFrentshi eziqhelekileyo, ziya kukunceda ukunciphisa ubukho besodiyamu ekutyeni kwakho, kunye nokungasebenzisi iikhalori ezininzi kunokuba ungazitshisa, a umkhwa othi, khumbula, ukhokelela ekutyebeni kakhulu kunye nokutyeba kakhulu. Ngokumalunga neesaladi, ayizizo zonke ezantsi kwisodium: gcina iliso kwiminquma, itshizi kunye nezinto zokunxiba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya okuphantsi kwesodium